महामारीमा संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा अफ्ठ्यारो परेको छ : मेयर सरावगी - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता महामारीमा संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा अफ्ठ्यारो परेको छ : मेयर...
महामारीमा संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा अफ्ठ्यारो परेको छ : मेयर सरावगी
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कस्तो पूर्वतयारी गरिरहेको छ?
कोरोना भाइरससँग जुध्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अहिलेको अवस्थामा गर्नुपर्ने मुख्य तीनवटा काम गरिरहेको छ । पहिलो, संक्रमण फैलन नदिनका लागि स्थानीय बासिन्दालाई विभिन्न माध्यमले चेतना फैलाउने र जगाउने, दोस्रो– लकडाउनमा घरघरमा मान्छेलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र तेस्रो– शंका लागेका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन । त्यसका लागि स्वाब परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मी फिल्डमै रहेका छन् । साथै, वीरगञ्जमा अझ थप संक्रमण हुन नदिन महानगरपालिका सकेसम्म लागिपरेको छ ।
यससँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा लकडाउनबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गरिरहेका छौँ । क्वारेन्टाइन रेखदेखका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएका छौँ । महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा स्यानिटाइज गरिरहेका छौँ । क्षमताअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । महानगरवासीले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिए यो महामारीबाट जोगिन सकिन्छ ।
विपत्को समयमा संघ र प्रदेश सरकारले कतिको सहयोग गरिरहेका छन्?
महानगरभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ?
महानगरपालिकामा सुरुको समयमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको थियो । अहिले पनि कोरोना परीक्षण गर्ने सामग्रीको अभाव छ । त्यसको परीक्षणका लागि पर्याप्त मात्रामा उपकरण छैन । वीरगञ्जमा सामान्य उपचारका लागि स्वास्थ्य उपकरणको अहिले अभाव देखिएको छैन । कोरोनाका शंकास्पद व्यक्तिलाई परीक्षण गरिएको छ । अब महानगरका धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई कोरोना परीक्षण गर्ने समय भएको छ । अब संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
कोरोनाको उपचारका लागि कसरी तयारी गरिरहनुभएको छ?
महानगरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा सामान्य ज्वरोदेखि अन्य रोगीको उपचार नपाएको गुनासो आएका छन् । कसरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन्छ?
कोरोना परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले वीरगञ्जमा मेसिन जडान गर्ने भनेको थियो । के हुँदै छ?
भारतसँगै जोडिएकाले बढी जोखिममा रहेका बारा, पर्सा, रौतहटलगायतका बिरामी स्वास्थ्य उपचारका लागि वीरगञ्ज आउँछन् । तर, प्रदेश सरकारले वीरगञ्जलाई छाडेर जलेश्वरमा मेसिन जडान गरेको छ । जुन कि अहिले जलेश्वरमा आवश्यक देखिएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारले जति कुरा गरेका हुन्छन्, त्यति पूरा गर्दैनन् ।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बुधबार नारायणी अस्पतालमा मेसिन आएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले किनेर पठाएको होइन । उहाँहरूले सहयोग लिएर पठाउनुभएको होला । वीरगञ्जमा परीक्षणका लागि आवश्यक मेसिन आए पनि अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन । अब हेरौँ, कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ । यो सञ्चालनमा आए भरतपुर महानगरपालिकाजस्तै परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो ।
यो महामारीमा सिडिओलगायत संघमातहत रहेका कर्मचारीसँग कतिको समन्वय भएको छ?
विपत्का समयमा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । तर, एक–अर्काबीच समन्वयको धेरै अभाव छ । स्थानीय तहलाई जानकारी नभएको काम उहाँहरू आफैँले गरेपछि समस्या भएको छ । स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र आफ्नो छ, संघ र प्रदेश सरकारको आफ्नै छ । जुन एक–अर्काबीच फरक–फरक रहेको छ । यहाँ आएर समन्वयको आवश्यकता भए पनि समन्वय देखिएको छैन । ताजा उदाहरण, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा केही दिनअघि संक्रमण देखियो । त्यसले वीरगञ्जवासी त्रासमा छन् । तर, स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय नगरेर लामो समयका लागि त्यो क्षेत्र सिलबन्दी गरिएको छ । अहिले स्थानीय तहका जिम्मेवार व्यक्तिलाई पनि प्रवेश गर्न दिइएको छैन । त्यसकारण जनतालाई समस्या हुन नदिन सहयोग र समन्वयको आवश्यकता देखिएको छ ।
उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन आपूर्ति व्यवस्था, कालोबजारी नियन्त्रण र गरिब मजदुरलाई भोकै बस्न नदिन कसरी काम गरिरहनुभएको छ?
त्यस्तै, लकडाउनमा प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गरिरहेका छौँ । प्रभावित परिवारलाई रोजगारी दिन सकिँदैन । तर, लकडाउन रहुन्जेल महानगरपालिकाले आवश्यकता भएका परिवारलाई राहतबापतको खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्न सक्छ । लकडाउन भएको तेस्रो दिनदेखि महानगरपालिकामा राहत वितरण भएको छ । अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा लकडाउनबाट प्रभावितमध्ये एक लाखभन्दा बढी व्यक्ति रहेका छन् । यसमा सबैलाई सहयोग गर्न आवश्यक देखिएको छ । साथै, यसमा केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाट राहतमा राजनीतिकरण भएको छ । त्यो तरिकाले राहत वितरण भए अगामी दिनमा अझ ठूलो समस्या देखा पर्छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ, यकिन छैन । त्यसैले महामारीमा सबै संयमित हुन आवश्यक छ ।
वीरगञ्जमा संक्रमण देखिएका व्यक्तिको अवस्था कस्तो छ?
दुई साताभन्दा बढी बसेका जमातीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि वीरगञ्जवासीमा डर, त्रास पैदा भएको छ । लामो समयसम्म जमाती बसेकाले कस—कसलाई लागेको छ भन्ने विषयमा धेरै अनभिज्ञ छन् । तर, अहिले मुस्लिम धर्मावलम्बीका अधिकांश व्यक्तिले कोरोना परीक्षण गर्न आफैँ अघि सरेर सहयोग गरिरहेका छन् । सुरुसुरुमा स्थानीय प्रशासनले गर्ने काममा केही असहयोग भएको थियो । अहिले विभिन्न ठाउँका मुस्लिम धर्मावलम्बीका जमातीहरू भेटेका व्यक्तिले सहयोग गरेका छन् । अब यस्तो अवस्थामा वातावरण अलिकति सहज भएको छ । साथै, यो महामारीमा लकडाउनलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सुरक्षित रूपमा सहयोग गर्न वीरगञ्जवासीलाई आग्रह गर्दछु ।
नयाँ पत्रिकाडेलीबाट साभार
Previous articleदोस्रो कोरोना संक्रमित युवती अस्पतालबाट डिस्चार्ज
Next articleजनकपुरको सडकमा पैसा छर्ने भाउजु र नन्द पक्राउ